डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड लिनेहरू तर प्रहरी, आर्मीलगायत अन्य सेवामा पनि छन् । किन निजामती कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गर्न लाग्नुभएको ? अरुले छुट पाउने हो ? अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मेरो जिम्मामा छ ।...
नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशन फेरि करिब एक महिना पछि सरेको छ, यस विषयमा तपार्इंको भनाई के छ ? नेकपा एमालेको महाधिवेशनको समयावधि माघ महिनामा नै सकिएको हो । विधानत: महाधिवेशन फागुन महिनाभित्रमै सम्पन्न गर्नुपर्ने...
सामसुङ मोबाइलले नै मलाई चिनायो
नेपाली बजारमा ५० प्रतिशत हिस्सा सामसुङ मोबाइलले लिएको छ भन्दा फरक पर्दैन होइन त ? यसलाई हामीले दुई किसिमले हेर्नुपर्दछ । एउटा भ्यालु र अर्काे भोलुम । भ्यालुबाट हामीले ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छांै...
डेटिङ जाने समय निकाल्न सक्दिन
आशिष्मा नकर्मी अहिले कलिउडकी उदियमान नायिका हुन् । आजभन्दा दुई बर्ष अगाडि ‘सिक्स फिट लाइफ’ बाट आफ्नो कलिउड यात्रा थालनी गरेकी आशिष्मा नकर्मीले त्यसभन्दा अगाडि एक दर्जनभन्दा बढी संख्यामा नेपाल भाषाका चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसकेकी...
तपाइँको विचारमा सेक्स के हो? सेक्स प्रकृतिको बरदान हो। मानवीय जीवनको आवश्यकता हो। सेक्स एजुकेसन कत्तिको आवश्यक छ? एकदमै आवश्यक छ। घर होस् वा स्कूल, सेक्सबारे खुलेर कुरा गर्दा नै राम्रो...
अध्यक्षमा ओलीको विकल्प छैन
एमालेलाई आगामी नवौँ महाधिवेशनको दौडधुप कत्तिको लागेको छ ? एमालेले हरेक पाँच वर्षमा आफ्नो महाधिवेशन गर्ने गर्छ । आठौँ महाधिवेशन भएको पाँच वर्ष पुरा भएको छ । त्यसैले अर्को महाधिवेशनको दौडधुप सुरु हुनु स्वाभाविक...